एसईईको नतिजा सार्वजनिक, नतिजा कसरी हेर्न ? » खबरहरुको एउटै केन्द्र
एसईईको नतिजा सार्वजनिक, नतिजा कसरी हेर्न ?
शुक्रबार, असार २, २०७४ १३:३४ मा प्रकाशित !
भक्तपुर, असार २ गते । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले एसएलसीको रूपान्तरित माध्यामिक शिक्षा परीक्षा अर्थात सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जाम (एसइई) को नतिजा शुक्रबार विहान सार्वजनिक भएको छ । नियमिततर्फ ४ लाख ४५ हजार ५६४ जना उत्तीर्ण भएका छन् भने एक्जाम्टेड तर्फ १६ हजार ५७२ जना उत्तीर्ण भएका छन् । यस वर्षको एसईई परीक्षामा ४ लाख ६२ हजार १३६ जना परीक्षार्थी संलग्न थिए ।
नतिजामा चित्त नबुझ्ने परीक्षार्थीले आजको मितिले १५ दिनभित्र पुनर्योगका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।
कुल आवेदकमध्ये ११ हजार ८ सय २५ विद्यार्थीहरु परीक्षाका लागि अयोग्य ठहरिएका थिए । त्यस्तै १० हजार ६ जना विद्यार्थी परीक्षामा अनुपस्थित भएका थिए । बाँकी ४ लाख ६२ हजार १ सय ३६ सहभागी भएका थिए ।
नतिजा हेर्नका लागि
नतिजाका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरकाे बेवसाइट www.soce.gov.np मा हेर्न सकिने बाेर्डले जनाएको छ । त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयको www.doe.gov.np, शिक्षा विभाग सानोठिमी भक्तपुरकाे www.doe.gov.np, राष्ट्रिय परीक्षा वोर्ड सानोठिमी भक्तपुरकाे www.neb.gov.np र एनसेल प्रा. लि.काे www.ncell.axiata.com मा गएर पनि परीक्षाकाे नतिजा हेर्न सकिने बाेर्डले जनाएको छ ।
1. खबर केन्द्र www.khabarkendra.com
2. Ministry of Education Singhadurbar Kathmandu: www.moe.gov.np
3. Department of Education, Bhaktapur: www.doe.gov.np
4. Examination Controller Office, Sanothimi, Bhaktapur: www.soce.gov.np
5. National Examination Board: www.neb.gov.np
6. Nepal Telecome: www.see.ntc.net.np
7. NCELL Pvt Ltd: www.ncell.axiata.com
8. Kantipur Digital Corps: www.ekantipur.com
nepali slc result
PREVIOUS POST Previous post: फ्युचरलाई जिल्ला लिग फुटबलको उपाधि
NEXT POST Next post: मनोनयन नयाँ मिति सार्वजनिक
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, असार २, २०७४ १३:३४
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, असार २, २०७४ १३:३४
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, असार २, २०७४ १३:३४
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, असार २, २०७४ १३:३४
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, असार २, २०७४ १३:३४